Professional Review - Somalia
Madaxweynaha Somali-land muuse Biixi oo ku dhawaaqay Golihiisa Wasiirada Cusub,
@BEST Consultancy - Xarunta la-talinta iyo cilmi baarista 2017-12-07
Waa Seminar hal maalin ah kaasoo lagu baranayo qaabka uGu fiican oo loo sameeyo CV ama taariikh nololeed oo casri ah iyadoo la adeegsanayo software computer-ka lagu shubanayo. Barnaamijka software-ka waa la siinayaa ardayda ka soo qeybgaleysa dhamaan. Waxa uu bilaabanayaa Duhurka ka dib 01:300pm-04:30pm maalinta Axadda 10/12/2017 Goobta lagu qabanayo waa Jaamacadda Daha International University, Taleex Cabdiqaasin dhabarka danbe ee shirkadda Hormuud km4. Tikidka waa $3 kaliya shahaadana wuu leeyahay. Ka faaiideysi wacan. Faahfaahin kala xiriir 0615462634
@Aramex Mogadishu MGQ 2017-10-17
Waa Jiif Complete ah oo iiba, aad iyo aad u qurux badan, qiima jaban lagasiin oo ku raali galiya, wac: Maxamed:00252615220899 Waxii faah faahin dheerada riix link hoose mise Picture ka. http://www.xaashi.com/#/details/10042/1213/Classified
@City real estate company - Cireco 2016-02-07
cidkasta oo doonaysa in ay u hesho gurigeeda shaqsi wanaagsan oo ka kireesta,ama qofkasta ooo doonaya in uu helo guri kiro ah asagoon galin waqti iyo warwareeg hala [email protected] real estate company ooo howshaas si hufan kuugu qabanayso walibana kaaga kenayso guri deg ma kasta oo gobolka banaadir ka mid ah fadlan kala xariir xafiiska city real estate ooo kuyaala wadada maka almukarama kasooo hor jeedka Hotel MUBAARAG DHISMAHA BANAADIR PLAZA WIXII FAAH FAAHIN AH OO INTAAS KA DHEERI AH FADLAN KALA XARIIR +252617463898 AMA +25262900009 AMA +252617619998 AMA +2526155559132